Filazana ara-dalàna - Ikkaro
Ikkaro an'i María Ángeles Franco Arce, NIF: 45799359B, misy adiresy ao, Sagunto, 46500, Valencia, Espana.
ny mailaka ikkaroweb (Amin'ny) Gmail (Point) fr
ny telefaona (+34) 645 134 539
Antsipirian'ny fifandraisana amin'ny tompon'andraikitra: María Ángeles Franco Arce miaraka amin'ny mailaka amin'ny fifandraisana ikkaroweb (at) gmail (dot) com
Ahoana ny fampiasana ny zonao: Azonao atao ny mandefa fifandraisana an-tsoratra any amin'ny biraon'ny voasoratra ao amin'ny María Ángeles Franco Arce na amin'ny adiresy mailaka voalaza ao amin'ny lohatenin'ity fampandrenesana ara-dalàna ity, ao anatin'izany ny kopian'ny ID-nao na ny antontan-taratasy famantarana mitovy amin'izany, mba hangataka ny fampiharana ny zonao. manaraka:
Zo hangataka fidirana amin'ny angona manokana: azonao atao ny manontany an'i María Ángeles Franco Arce raha mitsabo ny angon-drakitrao ity orinasa ity.
Zo hangataka ny famerana ny fitsaboana anao, raha izany dia tazonin'i María Ángeles Franco Arce izy ireo amin'ny fampiharana na fiarovana ireo fitakiana.
Zo hitsipahana fitsaboana: María Ángeles Franco Arce dia hampitsahatra ny fikirakirana ny angon-drakitra araka ny fomba ilazanao azy, raha tsy noho ny antony manery na ara-dalàna na fampiharana na fiarovana ny mety ho fitakiana dia tsy maintsy tohizin'izy ireo hatrany.
Manan-kery amin'ny fampidinana data: raha tianao ny handraisan'ny orinasa iray hafa ny angon-drakitrao, dia hanamora ny fitaterana ny angon-drakitrao amin'ny olona vaovao i María Ángeles Franco Arce.
Ahoana ny fomba itarainana amin'ny Fahefana mifehy: Raha heverinao fa misy olana amin'ny fomba fitantanan'i María Ángeles Franco Arce ny angon-drakitrao, dia azonao atao ny mitarika ny fangatahanao any amin'ny Lehiben'ny fiarovana an'i María Ángeles Franco Arce (voalaza etsy ambony) na fahefana fiarovana data izay mifanitsy, ny maha Sampan-draharaha Espaniola misahana ny fiarovana ny angona, ilay voalaza ao amin'ny raharaha Espana.
Fampahalalana ampiasain'ny María Ángeles Franco Arce amin'ny pejy sy piraofilina amin'ny tambajotra sosialy: Hatramin'ny fotoana anoloran'ny mpampiasa ny fanekeny alohan'ny hanesorany izany.
María Ángeles Franco Arce dia tapa-kevitra ny hampiasa ny angona, ho hajao ny tsiambaratelo ataon'izy ireo ary hampiasa azy ireo mifanaraka amin'ny tanjon'izy ireo, ary koa hanaraka ny adidiny hitandrina azy ireo ary hampifanaraka ny fepetra rehetra hialana amin'ny fanovana, fahaverezana, fitsaboana na fidirana tsy nahazoana alàlana, mifanaraka amin'ny fepetra voalazan'ny didim-panjakana 1720 / 2007 tamin'ny 21 Desambra, izay mankato ny Fitsipika momba ny fampandrosoana ny lalàna voajanahary 15/1999 amin'ny 13 Desambra, Fiarovana ny angona manokana.
Ho fanampin'izay, tsy maintsy havaozinao amin'ny fotoana rehetra ny angon-drakitrao, ho tompon'andraikitra amin'ny tsy fahatomombanana na ny lainga omena sy ny fahasimbana mety haterak'i María Ángeles Franco Arce amin'ny maha tompon'ity tranokala ity anao, na amin'ny antoko fahatelo tokony horaisina amin'ny fampiasana ny voalaza.
María Ángeles Franco Arce dia nandray fepetra fiarovana ampy mba hahitana ny fisian'ny virus, fanafihana mahery vaika ary tsindrona kaody.
Na izany aza, tokony ho fantatrao fa ny fepetra fiarovana amin'ny rafitra informatika amin'ny Internet dia tsy azo itokisana tanteraka ary noho izany, María Ángeles Franco Arce dia tsy afaka manome antoka ny tsy fisian'ny viriosy na singa hafa mety hiteraka fiovan'ny rafitry ny solosaina (rindrambaiko sy fitaovana) an'ny Mpampiasa na amin'ny antontan-taratasin'izy ireo elektronika sy rakitra ao anatiny.
Raha misy elanelana hita, dia nanaiky i María Ángeles Franco Arce ampahafantaro ny mpampiasa ao anatin'ny fe-potoana maharitra 72 ora.
Web sy fampiantranoana: Ny tranonkala dia manana encryption SSL TLS v.1.2 izay mamela ny fandefasana antoka ny angon-drakitra manokana amin'ny alàlan'ny endrika fifandraisana mahazatra, ampiantranoina amin'ireo mpizara izay nalain'i María Ángeles Franco Arce avy any Banahosting.
Angona nangonina tamin'ny alàlan'ny tranonkala: Ny angona manokana nangonina dia iharan'ny fanodinana mandeha ho azy ary ampidirina ao anaty rakitra mifanaraka aminy izay ananan'i María Ángeles Franco Arce.
Fomba fividianana: Mba hidirana amin'ny vokatra sy serivisy atolotra amin'ny magazay an-tserasera, ny mpampiasa dia manana fividianana fividianana fepetra mifehy ny fifanarahana voafaritra ao amin'ny politikantsika izay ilana ny fampahalalana momba ny fifandraisana sy ny fandoavam-bola. Ny tahiry dia voatahiry ao amin'ny mpizara Banahosting.
Fomba fisoratana anarana amin'ny Newsletter: María Ángeles Franco Arce dia mampiasa ny serivisy newsletter Sendgrid, Feedburner na Mailchimp izay mitahiry ny angon-drakitra mailakao, ny anarana ary ny fanekena ny famandrihana. Azonao atao ny misintona amin'ny mailaka amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny rohy manokana hita eo amin'ny farany ambany amin'ny entana azonao
Hafatra: Tsy manome serivisy amin'ny alàlan'ny fandefasan-kafatra mailaka i María Ángeles Franco Arce, toy ny WhatsApp, Facebook Messenger na Line.
Mpamatsy tolotra fandoavambola: Amin'ny alàlan'ny tranonkala dia azonao atao ny miditra, amin'ny alàlan'ny rohy, mankany amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo, toa ny PayPal o mivatra, mba handoavana ny vola omena an'i María Ángeles Franco Arce. Tsy misy fotoana azon'ny mpiasan'ny María Ángeles Franco Arce miditra amin'ny antsipirian'ny banky (ohatra, ny nomeraon'ny carte de crédit) izay omenao an'ireo ankolafy fahatelo voalaza ireo.
Fanatrehana amin'ny tambajotra: María Ángeles Franco Arce dia manana piraofilina amin'ny sasany amin'ireo tambajotra sosialy lehibe amin'ny Internet.
Tanjona sy ara-dalàna: Ny fitsaboana izay horaisin'i María Ángeles Franco Arce miaraka amin'ireo angon-drakitra ao anatin'ireo tamba-jotra voalaza etsy ambony ireo dia, indrindra, ilay avelan'ny tambajotra sosialy hananana mombamomba ny orinasa. Araka izany, i María Ángeles Franco Arce dia mety hampandre ny mpanaraka azy, raha tsy voararan'ny lalàna izany, amin'ny alàlan'ny fomba rehetra avelan'ny tambajotra sosialy momba ny hetsika, fampisehoana, tolotra ary fanomezana serivisy ho an'ny mpanjifa manokana.
Fitrandrahana angona: Na izany na tsy izany dia hanaisotra angona avy amin'ny tambajotra sosialy i María Ángeles Franco Arce, raha tsy hoe ny faneken'ny mpampiasa no azo manokana sy miharihary hanaovana izany.
Rights: Rehefa, noho ny tena toetran'ny tamba-jotra sosialy, ny fampiharana mahomby ny zon'ny fiarovana ny angon-drakitra dia arakaraka ny fanovana ny mombamomba azy manokana, i María Ángeles Franco Arce dia hanampy anao ary hanome torohevitra anao hahatratrarana izany. ny vintana.
Email. Ny serivisy mailaka an'i María Ángeles Franco Arcese dia manome serivisy Sendgrid.
Tambajotra sosialy. María Ángeles Franco Arce dia mampiasa ny tambajotran-tsosialy amerikana YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Flipboard izay anaovana fifamindrana data iraisampirenena, toetra amam-pahaizana sy teknika mifandraika amin'ilay tranonkala, eo am-pelatanany izay misy an'i María Ángeles Franco Arce dia mandray an-tanana ny angon-drakitra izay, alalàn'izy ireo, mpampiasa, mpamandrika na mpitety dia manolotra ny orinasa María Ángeles Franco Arce na mizara izany.
Mpamatsy vola. Mba hahafahanao mandoa vola PayPal o mivatra, María Ángeles Franco Arce dia handefa ny angon-drakitra tena ilaina an'ireo amin'ireo mpikirakira fandoavam-bola ireo amin'ny famoahana ny fangatahana fandoavam-bola mifanaraka amin'izany.
Voaaro ny mombamomba anao arakaraka ny politikanay momba ny fiainana manokana sy cookies. Amin'ny alàlan'ny fampiatoana ny famandrihana na amin'ny fanomezana ny mombamomba ny fandoavam-bola, azonao sy ekenao ny politikantsika momba ny fiainana manokana sy ny cookies.
Hatramin'ny fotoana fisoratanao anarana ho mpampiasa eto amin'ity tranonkala ity, María Ángeles Franco Arce dia mahazo alàlana amin'ny: Username sy email, adiresy IP, adiresy paositra, ID / CIF ary mombamomba ny fandoavam-bola.
Na izany na tsy izany, María Ángeles Franco Arce dia manan-jo hanova, amin'ny fotoana rehetra ary tsy misy fampandrenesana mialoha, fa mampahafantatra ny fampisehoana sy ny fametrahana ny tranokala ho io fampandrenesana ara-dalàna io.
Rehefa mampiasa an'ity tranonkala ity ny mpampiasa dia manaiky ny tsy hanao fihetsika mety hanimba ny endrika, ny tombontsoana ary ny zon'ny María Ángeles Franco Arce na ny antoko fahatelo na mety hanimba, hampandeha na hamaro ny vavahady na mety hisoroka, na izany na tsy izany. ny fampiasana ara-dalàna ny tranonkala.
Doka tohanana, rohy Affiliate ary dokam-barotra
Manolotra atiny, dokam-barotra ary / na rohy mpiara-miasa izahay. Ny fampahalalana izay hita ao amin'ireo rohy mpampifandray na ireo dokam-barotra nampidirina dia omen'ny mpanao dokam-barotra ihany, Tsy tompon'andraikitra amin'ny tsy mety na lesoka mety misy ao anatin'ireo doka ireo izahay, ary tsy manome toky ahy amin'ny lafiny rehetra ny traikefa, fahamendrehana na andraikitry ny mpanao dokam-barotra na ny kalitaon'ny vokatra sy / na ny serivisy.
Serivisy ho mpikambana:
Amazon Affiliates Fanamarihana ara-dalàna
Ampahafantariko anao ihany koa fa amin'ireo rohy afiliana hitanao ato amin'ity bilaogy ity dia misy avy amin'ny programa afiliana Amazon (anisany nisoratra anarana), noho izany dia adidiko ny mampahafantatra anao an'ity fampandrenesana avy amin'ny Amazon Affiliates ity, izay raha fintinina dia manazava fa tsy tompon'andraikitra amin'ny fandisoana diso mety ho ao anaty fampahalalana aseho amin'ny tranokala Amazon aho (ny anaran'ny vokatra , famaritana, vidiny, misy, sns.):
"Ny vidiny sy ny fisian'ny vokatra dia marim-pototra araka ny daty / ora voatondro ary azo ovaina. Ny fampahalalana momba ny vidiny sy ny fahafaha-miseho aseho amin'ny tranokala Amazon amin'ny fotoana vidiana dia hampiharina amin'ny fividianana an'io vokatra io."
“Ny sasany amin'ireo atiny hita ao amin'ity tranonkala ity dia avy amin'ny Amazon Services LLC. Ity atiny ity dia omena 'toy izao' ary azo ovaina na esorina amin'ny fotoana rehetra. "
Ny hevitra voalaza ao amin'izy ireo dia tsy voatery taratry ny fomba fijerin'i María Ángeles Franco Arce.
Amin'ny alàlan'ireo fepetra ankapobeny ireo dia tsy misy zon'ny fananana ara-tsaina na ara-indostria omena ny vavahady na amin'ireo singa mifototra aminy, ny fananahana, ny fanovana, ny fizarana, ny fifandraisan'ny besinimaro, ny fanolorana ho an'ny besinimaro, ny fitrandrahana, ny fampiasana indray, voarara mazava tsara amin'ny ny mpampiasa. mandroso na mampiasa natiora, na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana, amin'iza amin'izy ireo, afa-tsy amin'ny tranga izay avelany na omen'ny tompon'ny zony mifanitsy aminy ara-dalàna.
Fantatry ny mpampiasa ary ekeny fa ny tranokala iray manontolo, misy tsy misy endrika feno ny lahatsoratra, sary, volavola, rindrambaiko, atiny (ao anatin'izany ny firafitra, ny fisafidianana, ny fandaminana ary ny fampisehoana an'io), fitaovana sy sary audiovisual ary sary, dia arovan'ny mari-pamantarana, copyright ary Zo ara-dalàna hafa voasoratra anarana, mifanaraka amin'ny fifanarahana iraisampirenena izay antokon'i Espana sy zon'ny fananana hafa ary ny lalàn'i Espana.
Raha heverin'ny mpampiasa na ny antoko fahatelo fa nisy ny fanitsakitsahana ny zon'izy ireo manan-kery ara-tsaina noho ny fampidirana atiny sasany ao amin'ilay tranonkala, dia tokony hampandre izany toe-javatra izany amin'i María Ángeles Franco Arce izy ireo manondro:
Ireo mpampiasa dia afaka manolotra ny Rafitry ny Mpitsara ny mpanjifa izay i María Ángeles Franco Arce dia ho anjara andraikiny hamahana ny fifanolanana na fitakiana nipoitra avy amin'ity lahatsoratra ity na avy amin'ny hetsika nataon'i María Ángeles Franco Arce, afa-tsy ny famahana ireo fifanolanana izay miteraka fivoaran'ny asa iray. izany dia mitaky ny maha-mpikambana, ka amin'izany ny mpampiasa dia tsy maintsy mifandray amin'ny vatana mifanandrify amin'ny fikambanana fisotroana sahaza.
Ireo mpampiasa manana ny satan'ny mpanjifa na mpampiasa araka ny voafaritry ny fitsipiky ny Espaniola ary monina ao amin'ny Vondrona eropeana, raha nanana olana tamin'ny fividianana an-tserasera natao tamin'i María Ángeles Franco Arce izy ireo, hiezahana hanatratra fifanarahana ivelan'ny fitsarana. mankanesa any amin'ny Sehatra famahana olana eo amin'ny Internet, noforonin'ny Vondrona eropeana ary novolavolain'ny komisiona eropeana ambanin'ny Fitsipika (EU) 524/2013.
Ny fidirana sy / na ny fampiasana an'io na iza na iza manatanteraka ny fampiasa ny Mpampiasa, manaiky, manomboka izao, feno ary tsy misy famandrihana, ity fampandrenesana ara-dalàna ity, ary koa ireo fepetra manokana izay, raha ilaina, mameno azy, mifandraika amin'ny sasany serivisy sy atin'ny vavahady.
Ampahafantarina ny mpampiasa ary ekeny fa ny fidirana amin'ity tranonkala ity dia tsy midika velively, ny fiantombohan'ny fifandraisan'ny orinasa amin'i María Ángeles Franco Arce. Amin'izany fomba izany, ny mpampiasa dia manaiky ny hampiasa ny tranokala, ny serivisy ary ny atiny nefa tsy mandika ny lalàna ankehitriny, ny finoana tsara ary ny filaminam-bahoaka. Ny fampiasana ny tranokala ho an'ny tanjona tsy manara-dalàna na manimba, na amin'ny lafiny rehetra, dia mety hiteraka fahavoazana na hisorohana ny fiasan'ny tranonkala ara-dalàna dia voarara. Raha ny atin'ny tranokala ity dia voarara:
Ny hany tanjon'ireo rohy dia ny hanome ny mpampiasa fahafaha-miditra amin'ny rohy voalaza sy hahalala ny vokatray, na dia tsy tompon'andraikitra amin'ny tranga hafa aza i María Ángeles Franco Arce amin'ny valiny mety ho azon'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ireo rohy voalaza ireo.
Ilay mpampiasa mikasa ny hametraka fitaovana fampifandraisan-davitra ara-teknika rehetra avy amin'ny tranokalany mankamin'ny vavahadin-tserasera dia tokony hahazo alalana alalana nosoratan'i María Ángeles Franco Arce.
Ny fametrahana ny rohy dia tsy midika velively amin'ny fisian'ny fifandraisana misy eo amin'i María Ángeles Franco Arce sy ny tompon'ny tranokala niorenan'ny rohy, na ny fanekena na fankatoavana avy amin'i María Ángeles Franco Arce ny atiny sy ny serivisy ao aminy.
Toy izany koa, izy io dia mandray andraikitra, raha tsy alàlana mialoha, milaza mialoha sy an-tsoratra an'i María Ángeles Franco Arce hampiasa ny vaovao ao anaty tranonkala, ho an'ny mombamomba anao fotsiny, tsy afaka manao fanararaotana mivantana na an-kolaka ny atiny azonao idirana .
Ity tranonkala ity dia mitahiry rakitra rakitra mifandraika amin'ireo hevitra nalefa tamin'ity tranonkala ity. Azonao atao ny mampiasa ny zonao amin'ny fidirana, fanitsiana, fanafoanana na fanoherana amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka amin'ny adiresy ikkaroweb (at) gmail (dot) com.
Ity tranokala ity, ireo domains mifandraika ary tompon'ny atiny dia an'i María Ángeles Franco Arce.
Ity tranonkala ity dia misy rohy mitarika mankany amin'ireo tranonkala hafa tantanan'ny antoko fahatelo ivelan'ny fikambananay. María Ángeles Franco Arce dia tsy manome antoka na tompon'andraikitra amin'ny atiny izay voaangona ao amin'ireo pejin-tranonkala voalaza ireo.
Raha tsy nahazo alàlana avy any ivelany sy mialoha sy an-tsoratra an'ny María Ángeles Franco Arce, voarara tanteraka ny fanaovana kopia, afa-tsy amin'ny fampiasana manokana, fanovana ary amin'ny ankapobeny ny endrika fanararaotana hafa rehetra, amin'ny alàlan'ny fomba rehetra, amin'ny ampahany na amin'ny atin'ny tranokala.
Fady mafy ny manao fanodikodinana na fanovana an'ity tranonkala ity raha tsy nahazo alalana avy tamin'i María Ángeles Franco Arce. Vokatr'izany, i María Ángeles Franco Arce dia handray andraikitra na andraikitra mety hitranga, na avy amin'ny fanovana na fanodikodinana nataon'ny antoko fahatelo.
Azonao atao ny mampiasa, mikasika ny angon-drakitra voaangona, ny zo ekena ao amin'ny lalàna voajanahary 15/1999, ny fidirana, ny fanitsiana na ny fanafoanana ny angona sy ny fanoherana. Noho izany antony izany dia mampahafantatra anao aho fa azonao atao ny mampiasa ireo zony ireo amin'ny alàlan'ny fangatahana an-tsoratra sy voasonia izay azonao alefa, miaraka amin'ny photocopy ny karapanondronao na antontan-taratasy mitovy aminao, amin'ny adiresy paositra María Ángeles Franco Arce na amin'ny mailaka, nametaka kopian'ny ID tamin'i: ikkaroweb (at) gmail (teboka) com. Alohan'ny 10 andro dia hamaly ny fangatahanao izahay hanamafisana ny fanatanterahana ny zony izay nangatahinao hampiasaina.
Tsy manome toky i María Ángeles Franco Arce ary tsy tompon'andraikitra amin'izany izy na inona na inona fahasimbana mety hiteraka noho:
Tsy tompon'andraikitra amin'ny toe-javatra misy i María Ángeles Franco Arce noho ny fahasimbana mety hitranga noho ny fampiasana tsy ara-dalàna na tsy ara-dalàna an'ity tranonkala ity.
Amin'ny ankapobeny, ny fifandraisana misy eo amin'i María Ángeles Franco Arce sy ireo mpampiasa ny serivisim-pifandraisan-davitra misy azy eto amin'ity tranonkala ity dia iharan'ny lalàna sy ny fahefana espaniola.
Nanambara ny mpampiasa fa nampahafantarina azy ireo ny fepetra momba ny fiarovana ny angon-drakitra manokana, ny fanekena ary ny fanekena ny fitsaboana azy nataon'i María Ángeles Franco Arce, amin'ny fomba sy ny tanjona voalaza ao amin'ity politika manokana ity.
Mifanaraka amin'ny lalàna misy ankehitriny dia tsy manao fampiharana SPAM i María Ángeles Franco Arce, noho izany dia tsy mandefa mailaka ara-barotra izay mbola tsy nangatahana na nomen'ny mpampiasa alàlana izy. Vokatr'izany, amin'ny endriny tsirairay amin'ny tranonkala, ny mpampiasa dia afaka manome alalana azy ireo handray ny Gazetintsika / bulletin, na inona na inona fampahalalana ara-barotra angatahina ara-potoana.
1 hevitra momba «Fanamarihana ara-dalàna»
27 Mey 2020 amin'ny 6:58 hariva
misaotra fitaovana tsara hanentanana ny olona momba ny tantely ……